वरिष्ठता मिचेर आईओएमको डिनमा शाह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वरिष्ठता मिचेर आईओएमको डिनमा शाह
राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिने शाह प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक हुन् । अध्यापकहरूको वरिष्ठता क्रमअनुसार ५५ वर्षीया उनी ३३ औं नम्बरमा पर्छिन् ।
असार ४, २०७७ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डा. दिव्या सिंह शाहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिन नियुक्त गरेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने पद्धति मिचेर शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मिर्गौला विभाग प्रमुख शाहलाई नियुक्ति दिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबका कारण उपकुलपति डा. धर्माकान्त बाँस्कोटा शाहलाई डिन नियुक्त गर्न बाध्य भएका हुन् । ‘उहाँ बैठकमा आउँदा नै प्रधानमन्त्रीज्यूको यस्तो आग्रह छ भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र त्यही निर्णय नै गराउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो । डिन नियुक्त गर्न सिफारिस कमिटीले क्रमश: डा. प्रदीप वैद्य, डा. शाह र उत्तम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति बाँस्कोटाले वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा शाहलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरे । एक नम्बरमा नाम सिफारिस भएका वैद्यलाई पन्छाएर दुई नम्बरमा नाम सिफारिस गरिएकी शाहलाई नियुक्ति दिइएको हो । आईओएम उच्च स्रोतबाट प्राप्त अध्यापकहरूको वरिष्ठता क्रम हेर्दा ५५ वर्षीया डा. शाह ३३ औं नम्बरमा पर्छिन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जेठ २२ गतेदेखि रिक्त डिन नियुक्ति गर्न डा. प्रेमराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस कमिटी गठन गरेको थियो । डा. जगदीश अग्रवालले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि आईओएम डिनविहीन बनेको थियो । सिफारिस कमिटीमा डा. सुवास आचार्य र डा. जीवन शेरचन सदस्य थिए । त्रिवि ऐनमा सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गरेका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यालय स्रोत सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूकै भूमिकामा प्रश्न उठ्ने बताउँछ । स्रोतको भनाइमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न हाल विश्वविद्यालयको सेवाबाहिर रहेका डा. प्रेम ज्ञवालीलाई सदस्य बनाइएको हो । अर्का सदस्य डा. जीवन शेरचन पनि अवकाश पाइसकेका व्यक्ति हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओली र उपकुलपति बाँस्कोटाले शाहलाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको चर्चा अग्रवालको कार्यकाल सकिनुअघिदेखि नै थियो । प्रधानमन्त्रीनिकट रहेकै कारण डा. शाहले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यलगायत थुप्रै पदमा नियुक्ति पाउँदै आएकी छन् । ग्रान्डी अस्पतालमा समेत मानव अंग प्रत्यारोपण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकीले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
डा. शाहको भूमिका यतिमा मात्रै सीमित छैन । राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिने उनी प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक हुन् । स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा पनि उनै छिन् । यसअघि सत्तारूढ दलनिकट चिकित्सकहरूको भेलामा उपकुलपति बाँस्कोटाले कुलपति ओलीको इच्छाअनुसार शाहलाई डिन नियुक्ति गर्ने बताएको आईओएमका एक चिकित्सकले बताए ।
२०६७ पछि डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको आन्दोलनका कारण आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुँदै आएको छ । केसीले दुई साताअघि पनि विज्ञप्ति जारी गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका थिए । वरिष्ठताको आधारको सूचीमा नवनियुक्त डिन शाहको नाम ३५ औं नम्बरमा छ । डा. अग्रवाल र डा. अरुण सायमीले जेठ २२ गते अवकाश पाएपछि उनको स्थान ३५ बाट ३३ मा पुगेको छ । डा. गीता सायमी, डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले पनि भदौ २० गते अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछि २०८० कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउने योगेन्द्रप्रसाद सिंह आईओएममा वरिष्ठ हुन् ।
पूरा कार्यकाल काम गर्ने डिन खोजी गर्दा शाहलाई नियुक्त गर्नुपरेको उपकुलपति बाँस्कोटाले दाबी गरे । तर, २०८३ कात्तिकमा अवकाश पाउने एक नम्बरमा नाम सिफारिस भएका वैद्य शाहभन्दा वरिष्ठ हुन् । ‘शाहभन्दा वरिष्ठ १० जनालाई छोड्दा पनि उहाँ २५ औं नम्बरमा पर्नु हुन्छ । उहाँभन्दा क्षमतावान् र वरिष्ठ अरू प्राध्यापक पनि छन्,’ आईओएमका एक प्राध्यापकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नजिक भएकै कारण राजनीतिक भागबन्डामा दिव्या म्याडमलाई नियुक्ति दिइयो ।’ शाहले २०८५ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउने छिन् । उनी २०७१ असोजमा प्राध्यापक नियुक्ति भएकी थिइन् । सिफारिस कमिटीले नै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउँदै नाम सिफारिस गरेको ती प्राध्यापकले बताए । तेस्रो नम्बरमा नाम सिफारिस भएका श्रेष्ठ वरिष्ठता सूचीमा ४३ नम्बरमा छन् ।
डा. केसीको आन्दोलनपछि डा. राकेश श्रीवास्तव र डा. अग्रवाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । वरिष्ठता मिचेर डिनको जिम्मेवारी दिएका डा. बाँस्कोटासहित केपी शर्मा र शशि शर्माले काम गर्नै नपाई पद छाड्न बाध्य भएका थिए । शर्माका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण उत्पन्न विवादले नयाँ मोड लिएर उमेरबारे नयाँ तथ्य खुल्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।
आईओएम डिन नियुक्तिमा सधैं किचलो भइराख्ने कारण वरिष्ठताको नयाँ मापदण्ड बनाएर नियुक्ति दिइएको बाँस्कोटाले जनाए । ‘कम्तीमा ५ वर्षको प्राध्यापक अनुभव भएको र पूरा ४ वर्षे कार्यकाल समय दिन सक्ने डिनको खोजी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मापदण्डका १४ प्राध्यापक भेटिए, महिलालाई प्राथमिकता दिऊँ भनेर शाहलाई नियुक्ति दिइयो,’ उनले भने । वैद्य र श्रेष्ठले आईओएमभित्रै उत्कृष्ट कार्य गरिराखेकाले थप जिम्मेवारी नदिएको उनले जनाए । मेडिकल विद्यार्थी एसोसिएसनले भने राजनीतिक चलखेल, निकटता र भागबन्डाका आधारमा डिन नियुक्ति गरिएको भनेर आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर वरीयता मिचेर डिन नियुक्त गरिनु लज्जास्पद भएको बताएको छ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०७:५१
अख्तियारलाई अनुचित क्षेत्राधिकार
असार ४, २०७७ सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाही तथा प्रभावकारितामाथि अहिल्यै अनेकौं प्रश्न छन् । नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा बेदखल चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको छ ।
ती सार्वजनिक एवम् सरकारी निकायका गडबडी नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन खोज्नु सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत छ । संविधानले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा’ अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तसर्थ, सरकारले ऐन संशोधन गरी निजीलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समेट्न खोज्नु संवैधानिक मर्मविपरीत जानु हो । निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको भन्न पाइँदैन । अख्तियारको वर्तमान कार्यशैली र कार्यशक्ति दुवै हेर्दा अनि विगतको अभ्यास नियाल्दा यस्तो प्रावधान मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ (आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) को दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूसमेत समेटिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले मुलुकभरका जुनसुकै निजी कम्पनी, सहकारी, बैंक तथा गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्नेछ । संवैधानिक अंग भए पनि अपवादबाहेक अख्तियारमा कार्यपालिकाको छाया देखिँदै आएको पृष्ठभूमिमा गलत मनसायले आएको यो विधेयकउपर सांसदहरूले उचित विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।
पहिलो त, अख्तियारसित सबै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सांगठनिक क्षमता नै छैन । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने आफ्नो सीमित संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि यो संस्था असफलप्रायः भइरहेको छ । देशमा राज्यस्रोतमाथि गरिएका एकपछि अर्को ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी एकाध वर्षमै वर्ग नै फड्को हानेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू समाजले औंल्याएरै भन्न सक्छ । कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व व्यक्तिमै छ । तैपनि अख्तियारले यो सबै देख्दैन, उसको चासो सानातिना कर्मचारीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । उसले कारबाही चलाएका आधारमा हेर्दा त नेपालमा भ्रष्टाचारै छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन यथार्थ होइन । तसर्थ, अख्तियारलाई उसको तोकिएको भूमिकामै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । निजीको बोझ थपिदिएर झनै पंगु बनाएर बदनामको भारी बोकाउनु हुँदैन ।
दोस्रो, यो प्रावधानले अख्तियारलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्नेछ । सरकारले आफ्नो भूमिका नभएजस्तो देखाउने तर संवैधानिक अंगमार्फत निजी क्षेत्रको शिरमाथि सधैं तरबार झुन्ड्याउने कसरत विधेयकमार्फत गर्न खोजेको बुझिन्छ । हिजो यस्तो कानुनी प्रबन्ध नै नभएका बेलासमेत अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा उठाउन र इबी साध्न निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिएको दृष्टान्त हाम्रा सांसदहरूले यति चाँडै भुल्न हुँदैन । त्यसैले यो कानुनी प्रावधानको भोलि दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । सांसदहरूले अहिल्यै ख्याल गर्नुपर्छ, भोलि अख्तियार कार्यपालिका वा शक्तिकेन्द्रको इसारामा निजी क्षेत्रका संस्था र कम्पनीविरुद्ध प्रयोग हुन थाल्यो भने देश कहाँ पुग्ला ?
तेस्रो, भोलि यो कानुनको दुरुपयोग भएमा निजी क्षेत्र आतंकित बन्नेछ, उसको मनोबल कामै गर्न नसक्ने गरी खस्किनेछ । निजी क्षेत्र त्रसित बन्यो भने वैदेशिक लगानी मात्र प्रभावित हुने छैन, स्वदेशी लगानीमा पनि संकुचन आउनेछ । पुँजी पलायनको खतरा बढ्नेछ । अर्कोतर्फ, आजै पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्नुको एउटा कारणका रूपमा विकास प्रशासकहरूमा भएको ‘अख्तियारले अनावश्यक दुःख दिने’ त्रासलाई बताइन्छ । तसर्थ, सांसदहरूले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भोलि अख्तियारकै कारण निजी क्षेत्रसमेत सशंकित हुने अवस्था आयो भने त्यसले मुलुकको समग्र प्रगति प्रक्रिया ठप्प बनाउन सक्नेछ ।
सरकारी कदम किन पनि संशयपूर्ण छ भने, नीतिगत निर्णयका नाममा अनियमितता भए–गरेका कतिपय दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि विधेयकले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने पुरानो प्रावधान कायमै राखिएको छ । अझ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट प्रावधानको दुरुपयोग प्रदेशस्तरमा समेत झाँगिने प्रस्टै छ । जबकि, अख्तियारले स्वयंले केही वर्षयताका आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती ठहर्‍याउँदै आएको छ । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि यही थियो/हो । तर विधेयकचाहिँ टाउको दुखेको औषधि अन्यत्र लगाउने गरी ल्याइएको छ ।
यी सबैको मतलब, निजी क्षेत्रले अनियमितता नै गर्दैनन् वा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइनुपर्छ भनेको होइन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न तथा त्यसका सञ्चालकहरूले नाजायज सम्पत्ति हासिल गरेमा छानबिन गर्न राज्यका अरू थुप्रै निकाय खडा गरिएका छन्, तिनैलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि बैंकहरूलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छ, बैंकिङ कसुर हेर्न प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता संरचना छन्, तिनैलाई बलियो बनाइनुपर्छ । कर छली हेर्ने निकायहरू छँदै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधित्व नगर्ने र राज्यकोषबाट प्रत्यक्ष सुविधा नलिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदाधिकारीका रूपमा व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कामलाई सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छाएर अख्तियारलाई दिन मिल्दैन ।
अहिलेकै कानुनअन्तर्गतका नियमनकारी निकायले उचित काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले बाटो बिराउलान् भनेर सोच्नै पर्दैन । फेरि यो देश निजी क्षेत्रको अनियमितताले बिग्रिएको हो कि सरकारी एवम् सार्वजनिक लाभको पदमा बस्नेहरू भ्रष्ट भएर हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ । तसर्थ, आजको आवश्यकता अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेभन्दा पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा बढी स्वायत्त बनाउने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने व्यक्ति त्यहाँ पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । तसर्थ भोलिका दिनमा हुन सक्ने अख्तियारको ‘अराजक राज’ लाई रोक्न सदनमा सांसदहरूले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गरी यो प्रावधानलाई सच्याउनैपर्छ । यथा रूपमा उक्त विधेयक पारित गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०७:५०